रोचक खबर Archives - Enepal Serofero
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ स् अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ स् धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ । १. धन:सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्था
पैसा छैन भन्दै रोग नपाल्नुस् है ! राजधानीको एउटा अस्पतालमा एक सय रुपैयाँमै उपचार हुन्छ ✍️ शेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुहोला
न्युन आय भएका व्यक्तिहरु धेरै पैसा लाग्ने भयले अस्पताल जान डराउँछन् । र शरिरमा रोग पालेर बस्ने गर्छन् । बिरामीलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गर्न यो अस्पताल खोलिएको हो । बाँसबाट बनाईएको अस्पताल, बाहिरबाट हेर्दा कुनै कटेज होटल जस्तो चिटिक्क देखिन्छ । यहाँ उपचार गराउन एक सय रुपैया भन्दा बढि शुल्क तिर्नु पर्दैन् । काठमाण्डौको मित्रपार्क चोकबाट गुह्येश्वरी हुँदै गएपछि कुमारीगालमा रहेको एउटा अस्पतालमा पुगिन्छ । बाँसबाट बनाईएको यो अस्पताल, वाहिरबाट हेर्दा कुनै कटेज होटल जस्तो चिटिक्क देखिन्छ । अझ, त्यसलाई चम्काउन गुलाबी रंग प्रयोग गरिएको छ । गेटबाट छिर्ने बित्तिकै दायाँतिर डाक्टरको सूची देखिन्छ । बायाँतिर टिकट काट्ने काउन्टर छ । तपाईलाई के रोग लागेको छ, काउन्टरमा भन्नुहोस् । काउन्टरमा बस्ने व्यक्तिले तपाईको रोग अनुसारको डाक्टरको नाम सिफारिस गर्छन् र तपाईको हातमा एउटा पूर्जा थमाउँछन् । अब तपाई
बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानीसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । दिन शुभ हुनका लागि तन्दुरुस्त शरीर चाहिन्छ । शारिरीक व्यायमले शरिर फुर्तिलो बनाउँछ । त्यसैले बिहानको समयमा अधिकाँस मानीस शारिरीक व्यायममा केन्द्रित हुन्छन् । व्यायमसँगै पुजापाठमा सक्रिय रहन्छन् । मनलाई शान्त पार्ने, देवतालाई खुशि पार्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् । यी दुई कामसँगै अरु के के गर्यो भने हुन्छ फलीफाप ? १.तामाको लोटामा राखेको पानी खानुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ । यसको लागि राति सुत्ने बेलामा तामाको भाँडोमा पानी राख्ने र बिहान उठ्ने बित्तिकै पिउनाले पेट सम्बन्धी अधिकांश रोग कब्जियत, अपच, ग्याष्टिक आदि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यो काम गर्नु भन्दा पहिले चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । २.
सबैको गन्तब्य यहि हो जतिसुकै लोभ र लालच गरेपनी एक दिन मर्नु नै छ ! जीवन बदल्न यो लेख पुरा पढ्नुहोला।
सबैको गन्तब्य यहि हो जतिसुकै लोभ र लालच गरेपनी एक दिन मर्नु नै छ ! जीवन बदल्न यो लेख पुरा पढ्नुहोला। हामि सबैलाई लाग्ने गर्छ कि मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ, मेरो यस्तो चिनजान छ, मेरो यस्तो बलियो छोरा – छोरी वा आफन्त छन् । तर याद गरौँ त ! के हामीलाई हाम्रो मृत्यु को समयमा इनले बचाउन सक्छन् ?आखिर जीवन छोटो छ । जतिसुकै लोभ र लालच गरे पनि एक दिन मर्नु नै छ । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल सँग के थिएन र ? पछिल्लो अवस्थामा मासु र रक्सि को सेवन अत्याधिक गर्ने लत बसेका प्रकाश को मृत्यु भएपछी अहिले प्रचण्ड पनि एक्लो बनेका छन् ।युद्धकालमा प्रचण्ड ले कतिका ज्यान लिए होलान्, कति लाई घरबार बीहीन बनाए होलान् तर आफ्नै छोराको पनि अकाल मा मृत्यु हुन्छ भनेर सायद उनलाई सपनामा पनि बिश्वास थिएन होला । जब पशुपतिमा आफ्नो छोरालाई दागबत्ती दिंदा प्रचण्डको हात काम्यो र आँखा बाट आँशु का धारा बगे यसैले प्रमाणित गर्
मगर्नी भाउजूको कथा (12,776)